Mourinho: Chelsea Weeraryahano Ayay La Soo Wareegaysaa
HomeWararka MaantaMourinho: Chelsea Weeraryahano Ayay La Soo Wareegaysaa
Cadalool-(Jimce -May-9 ) – Tababare Jose Mourinho ayaa daboolka ka qaaday in xagaagan ay kooxda Chesea soo iibsan doonto ciyaaryahano weerarka ka ciyaara, si ay kooxdu uga soo kabato sanadkan koob la’aanta ugu dhamaaday.
Mourinho oo naadiga ku soo noqday tababarkiisa kadib 6 sanno oo uu ka maqnaa, wuxuu ku guul daraystay sanadkan oo kiisii koowaad u noqonayay inuu u horseedo naadiga inay qaadaan wax koobab ah, sidaas darteed wuxuu si aad ah ugu dedaalayaa in sanadka labaadna aanu ku dhaafin guul la’aan sida xili ciyaareedkan oo kale.
Oday-gan reer Portuqaal ayaan marna la gabanin inuu meel fagaare ah ka cambaareeyo, weeraryahanada wakhti xaadirkan kooxda ku sugan, waxaanu ku eedeeyey ciyaaryahanada Samuel Eto’o, Fernando Torres iyo Demba Ba inay u dhaliyeen naadiga 18 gool oo kali ah dhamaantood xili ciyaareedkan gebo gabada ah.
Shir jaraa’id oo uu Jimcihii maanta qabtayna , wuxuu Mourinho ku iftiimiyey in Chelsea ay dardar gallinayso qorsheheeda dhinaca weerarka, iyadoo uu kamid yahay xidigaha ay ku xoojinayso weerarkeeda, laacibka afka hore ee naadiga Atletico Madrid, Diego Costa, kaas oo ay la gaadheen heshiis ay ku keenayaan Stamford Bridge dhamaadka xili ciyaareedkan, qiimihiisuna yahay €42 million.
“Weeraryahanku waa arin aanu ka hadlaynay ilaa mudo aad iyo aad u dheer,” ayuu Mourinho Yidhi.
“Bilihii December iyo January, markii aad dhamaantiin [saxaafada oo dhan] aad i weydiinayseen sababta aanu weeraryahan ula soo wareegi la’nahay, Waxaan si cad idiinku sheegay in arintaasi tahay mid aanu hawsheeda ku gudo jirno, oo aanu xalkeeda ka eegayno qorshe mustaqbalka fog balse aanaan ku deg-deg u gallaynin.
“Waa arin caadi ah inaanu imika doonayno inaanu soo qaadano weeraryahano. Waanu haysanaa weeraryahano fiican, ciyaaryahano aad u wanaagsan, laakiin waa qorshaha xoojinta kooxda ee wakhtigu qasbayo.
“Qolo kastaa waxay doonaysaa inay suuq furanka u gallaan si ay isu xoojiyaan, anaguna meesha kaliya ee aanu isbedelka ku samaynaynaa waa afka hore ee kooxda.”
Dani Alves Oo Loo Haysto Debaal Degii Uu Sameeyey Habeenkii City
Aguero Oo Diyaar U Ah Kulanka West Ham Ee Lagu Ogaanayo Cida Hanatay Horyaalka Ingiriiska
Alex Oo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyey Milan